Huawei P40 Pro: Fanadihadiana sy fitsapana ny fakan-tsary | Androidsis
Huawei P40 Pro: Famerenana sy fisedrana ny fakan-tsary
Ny nampanantenaina dia ny trosa, tamin'ny herinandro lasa izahay dia nanao ny unboxing sy ny fiheverana voalohany an'ny Huawei P40 Pro vaovao, ny vavahadin-tsoratry ny kaompania aziatika izay naseho tao anatin'ity gazety mavesatra rehetra ity. Toy ny amin'ny tranga rehetra, dia manatanteraka ny unboxing izahay ary mametraka anao eto herinandro monja aty aoriana mba hahafahanay mizaha toetra azy amin'ny antsipiriany mba hitondranay anao ny hevitray marina indrindra. Niasa nandritra ny fotoana kelikely tao amin'ny Huawei P40 Pro vaovao izahay ary mitondra ny fanadihadianay lalina ho anao miaraka amin'ny fitsapana fakantsary, fantaro miaraka aminay ireo mampiavaka azy.
Raha efa niresaka momba ny angona teknika sy isa isa izahay teo aloha, izao dia hifantoka amin'ny traikefan'ny mpampiasa anay izahay, amin'ny zavatra nampahatsiahivin'ilay fitaovana antsika isan'andro fotsiny.
1 Ny endrika curvy, mampidi-doza ary tsara tarehy
2 Hery mihoatra ny ampy
3 Ny fifandraisana dia mandeha lavitra kokoa
4 Fizarana multimédia sy fahaleovan-tena
Ny endrika curvy, mampidi-doza ary tsara tarehy
Huawei dia te-hanome rivotra madio P40 Pro, izay mbola mitahiry fitoviana amin'ny elanelana teo aloha, izay mampahatsiahy antsika foana izay niaviany, nefa nanao vivery ny zavatra tokony hatao feno fankasitrahana kosa eo amin'ny tsena ankehitriny. Hitanay ny curvature vaovao voalohany izao any amin'ny faritra ambony ka hatrany ambany, zavatra izay manampy antsika hanararaotra ny efijery misimisy kokoa, fa izany kosa dia hanimba ny fialambolin'ireo izay tsy nahavita niovaova amin'ny efijery niaraka tamin'ny curvature voatonona.
Amin'ny lafiny iray, nahazo lanja ny fitaovana raha oharina amin'ny P3o Pro, fa ny endriny kosa dia mahatonga azy io ho ergonomic kokoa raha azo atao. Hitanay indrindra ny fahasamihafana eo amin'ny rafitra freckle vaovao ho an'ny fakantsary sy ilay scanner an'ny tarehin-tsarimihetsika, izay mety ho tianao bebe kokoa na latsaka, saingy nahavita nampifandray tsara ny interface an'ny mpampiasa sy ny bara misy azy ny Huawei, angamba marika hafa no tokony hianatra betsaka amin'ity lafiny ity. Azo antoka fa ity Huawei P40 Pro dia terminal iray izay mahatsapa tsara ao an-tanana ary mahazo aina, Na eo aza ny fahita matetika amin'ireo terminal fitaratra ireo, dia mazàna manintona ny dian-tanan'izy ireo amin'ny moramora.
Hery mihoatra ny ampy
Amin'ny ambaratonga teknika, fantatsika tsara ny mpikirakira azy avy amin'ireo maodely hafa teo alohan'io orinasa io ihany, na izany aza, dia miteraka fisalasalana, satria ankehitriny isika dia tsy maintsy manatanteraka vahaolana amin'ny efijery misimisy kokoa sy tahan'ny fanavaozana avo kokoa. Na izany aza, toy ny tamin'ny maodely teo aloha ihany, ny P40 Pro dia mialoha ny androny, tsy mbola nahita olana tamin'ny fampiasana izahay.
modely P40 Pro
efijery 6.58 inch OLED - 2640 x 1200 FullHD + amin'ny 90Hz
Fakan-tsary any aoriana 50MP RYYB + Sudra Ultra Wide 40MP + 8MP 5x Telephoto + 3D ToF
Fakan-tsary eo aloha 32 MP + IR
fitehirizana 256 GB azo ovaina amin'ny karatra fananana
Mpamaky ny dian-tànana Eny - Eo amin'ny efijery
bateria 4.200 mAh misy fiampangana haingana 40W USB-C - Fiatoana Qi azo averina 15W
Operating System Android 10 - EMUI 10.1
Fifandraisana sy ny hafa WiFi 6 - BT 5.0 - 5G - NFC - GPS
lanja Gramin'ny 203
lafiny X X 58.2 72.6 8.95 MG
vidiny 999 €
Raha fintinina, tsy nahita rindrambaiko nanohitra an'ity Huawei P40 Pro ity izahay, nilalao PUBG, Fortnite ary lalao hafa tamim-pitoniana tanteraka, na amin'ny fitetezana na amin'ny sisa amin'ireo fizarana, hery mitsitsy ao amin'ity terminal ity.
Ny fifandraisana dia mandeha lavitra kokoa
Manana fahasamihafana mazava amin'ny rahalahiny teo aloha isika ary izany dia manana ny processeur telecommunications 5G an'ny orinasa Aziatika isika izao. Izany dia manome antoka antsika bebe kokoa noho ny manana Fifandraisana 5G amin'ny fitaovantsika, zavatra tena tsy dia misy fampiasana firy izao satria vitsy ny orinasa manolotra fifandraisana 5G ary kely kokoa aza ireo faritra ahafahantsika miditra amin'ny vokatra manokana toy izany. Na izany aza, tsy afaka manadino isika fa manana NFC ary ny tena zava-dehibe dia ny WiFi 6.
Ity fifandraisana WiFi 6 ity aseho intelo hafainganam-pandeha amin'ny fifandraisana tsy dia tsara amin'ny fitsapana ataonay, nahazo valiny mahafinaritra izahay raha oharina amin'ireo fitaovana hafa nanananay tato ato. Etsy ankilany, Tsy ilaina intsony ny milaza, ny Huawei Share sy ny Huawei Beam dia manome lanja fanampiny ho antsika raha ny fananana tontolon'ny fifandraisana tsy misy tariby izay orinasa toa an'i Apple ihany no afaka manolotra. Mazava ho azy ary na dia tsy manana Jack 3,5mm aza isika dia manana fifandraisana mandritra ny fotoana fohy saika amin'ny lafiny rehetra ary ity dia antsipirihany tokony horaisina.
Fizarana multimédia sy fahaleovan-tena
Ny tontonana dia nitombo a kely ary ankehitriny isika dia manana famirapiratana somary avo kokoa noho ny teo aloha miaraka amin'ny saturation ny loko miharihary kokoa, saingy tsy afaka milaza isika fa fahasamihafana mihoampampana koa. Ao amin'ny sehatry ny feo dia manana ny tsy fahampian'ny mpandahateny ambony ao ambadiky ny efijery isika, noho izany dia manana feo stereo somary decaffeined izahay ary tsikaritra izany rehefa manarona ilay mpandahateny eo ambany izahay. Na izany aza, ao amin'ny fizarana momba ny feo syste Huawei P40 Pro dia nihatsara koa tamin'ny haavon'ny volavola ary indrindra amin'ny haavon'ny kalitaon'ny feo, tsara kokoa.
Mikasika ny fizakan-tena, 4.200 mAh izay tsy mijaly na eo aza ny rVahaolana QHD + sy tahan'ny fanavaozana 90Hz izay mahatonga ny traikefa ho zakaina tokoa, mifanaraka amin'ny fahaiza-manao HDR marobe ary ambonin'izany rehetra izany dia manana kalitao mirehitra. Manana 40W haingana izahay ary ny famerenana amin'ny laoniny tsy misy tariby. Azo antoka fa ny fitantanana bateria an'ny EMUI 10.1 dia mbola misy kalitao, mora mihoatra ny adiny enina isika noho izany isika dia miatrika ny avo lenta miaraka amin'ny iray amin'ireo fahaleovan-tena tsara indrindra eo amin'ny tsena.
Toa ahy ny fakantsary amin'ity Huawei P40 Pro ity tsotra sy tsotra no feno indrindra eny an-tsena hatreto:
40MP f / 1.8 Zoro Ultra Wide
Telephoto 8MP misy zoom 5x
Ny valin'ny sensor voalohany amin'ny toe-javatra mahazatra dia mavesatra, 50MP ary mifanohitra tanteraka ary saika matotra matihanina ahafahantsika manitatra ny sary sy manohy mahazo antsipirihany be dia be. Toy izany koa no mitranga amin'ny Ultra Wide Angle, izay nihoatra ny kinova taloha tamin'ny fampahalalana ary mitazona kalitao tena avo lenta, na eo aza ny zava-misy fa izy ireo matetika no sensor indrindra voakasik'izany.
Ny fakana sary amin'ny alina dia mbola teboka iray izay hametrahan'ny Huawei fanamafisana betsaka ary nahazo valiny mahafinaritra izahay saika amin'ny toe-javatra rehetra, na dia mazava ho azy aza fa very antsipirihany amin'ny fomba ampiasantsika ny Zoom isika, na izany aza, na dia amin'ireto tranga ireto aza dia mbola mahagaga ihany.
Amin'ny lafiny iray, ny fakantsary «selfie» dia manolotra maody hatsaran-tarehy mihamazava hatrany na dia tsy mamono azy aza isika, saingy afaka misambotra fampahalalana marobe sy manome horonantsary faran'izay avo lenta. Mikasika ny fandraketana horonantsary dia hitantsika fa manolotra anay hatrany amin'ny Wide Angle ho safidy voalohany rehefa manokatra io asa io (maninona?), Manana rakipeo izahay Tena nilamina tsara 4K (iray amin'ireo fandrosoana tsara indrindra an'ny Huawei) amin'ny sensor rehetra ary mazava ho azy fa mahita tabataba isika raha milatsaka ny hazavana, Mamporisika anao izahay hijery ny horonan-tsarinay hijerena azy. Mikasika ny fivezivezena miadana, Huawei dia manohy mampitombo ny tratrany, eny, mila jiro be dia be mba hahazoana valiny mendrika amin'ny taha ambony indrindra.
Mitohy ho mariky ny kalitao sy ny hatsarana amin'ny famokarana izy io
Manana ny farany izahay amin'ny fitaovana, herinaratra, 5G ary WiFi 6
Manana efijery avo lenta sy fakantsary fakan-tsary tsara indrindra izahay
Sazy tsy azo ihodivirana izy amin'ny tsy fisian'ny GApps
Tsy fahampian'ny fampifanarahana ny rindranasa sasany amin'ny famolavolana efijery ambany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Huawei P40 Pro: Famerenana sy fisedrana ny fakan-tsary
[video] Ahoana ny fanovana ny DNS amin'ny Android for Cloudfare na izay tianao